Naqshadaynta Soo-saarista - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Naqshadeynta wax soosaarka (DFM) waa habka looga dhigayo wax soo saarka mid sahlan oo ka qaalisan soosaarka. Injineerada Fumax Tech waxay leeyihiin waayo aragnimo sanado badan leh farsamooyin kala duwan oo DFM ah. Khibraddan DFM waxaa loo isticmaali doonaa in lagu yareeyo qarashka isla markaana meesha looga saaro dhibaatooyinka la xiriira soo saarista wax soo saarkaaga.
Injineerada Fumax aad ayey u yaqaanaan habab kaladuwan oo wax soo saar ah, injineerada Fumax waxay hada kusugan yihiin tikniyoolajiyadii ugu dambeeyay ee wax soosaarka, sidaa darteed tikniyoolajiyadan waxaa lagu dabaqi karaa si ay udhashaan naqshada ugu fiican. Aqoontooda wax soo saar waxaa lagu dabaqaa tillaabo kasta oo nidaamka naqshadeynta ah si loo hubiyo in badeecada ugu dambeysa ay fududahay in la isku soo uruuriyo iyadoo weli la buuxinayo dhammaan shuruudaha alaabta.
Waxyaabaha wanaagsan ee ku saabsan deisgn ee Fumax:
1. Fumax waa warshad. Waan ognahay dhammaan habka wax soo saarka. Naqshadeeye ayaa aqoon qoto dheer u leh geeddi-socod kasta oo wax-soo-saar. Marka naqshadeeyayaasheena ayaa maanka ku hayn doona inta ay ku guda jiraan howshooda qaabeynta soosaarka fudud tusaale ahaan, habka SMT, waxsoosaarka degdegga ah, iska ilaali qaybaha daloolada, u isticmaal qaybo badan oo SMT ah waxtarka.
2. Fumax waxay iibsaneysaa qaybo malaayiin ah. Marka, waxaan xiriir aad u wanaagsan la leenahay dhammaan qeybiyeyaasha qeybaha. Waxaan dooran karnaa qaybaha tayada ugu fiican laakiin qiimaha ugu hooseeya. Tani waxay siin doontaa karti qiimo leh macaamiisheenna.